Daawo : Xukuumadda Somaliland Oo Xaqiijisay Khasaaraha Rabshadihii Hargeysa Stadium
HomeWararka MaantaDaawo : Xukuumadda Somaliland Oo Xaqiijisay Khasaaraha Rabshadihii Hargeysa Stadium
07/11/2016 Abdiwahab Ahmed
Hargeysa (Cadalool)-Qalalaase iyo rabshado hadheeyey garoonka Hargeysa Stadium, halkaas oo ay ka socotay ciyaar gunaanad u ahayd heerka Groups ka ee tartanka kubadda cagta Goboladda Jamhuuriyada Somaliland, ayaa sababay dhaawaca tiro dad ah oo ku dhaw 30 qof.
Kulanka rabshaduhu hadheeyeen ayaa dhex marayay xulalka gobolada, Hawd iyo Daad-madheedh, kaas oo natiijadiisu go’aaminaysay xulka Afraad ee kamid noqon lahaa xulalka ku hirdami doona Semi finalka tartanka goboladda dalka oo maalmihii ina dhaafayba ka socday geggida Hargeysa Stadium.
Dadka dhaawacmay oo loo soo daad-gureeyey dhinaca cusbitaalka guud ee magaalada, ayuu tiradooda wasiirka Caafimaadku oo u waramay Muuq baahiya Bulsho Tv ku sheegay, inay gaadhayaan 28 qof, kuwaas oo isugu jira, taageerayaal iyo ciidankii ammaanka garoonka sugayay oo qaarkood dhaawacoodu dhagax tuur ku soo gaadhay.
Xulka Daad-madheedh, ayaa ciyaarta ku badiyey 2-1 , sidaasna ku noqday xulkii u dambeeyey ee ka gudba heerka Hormadda ama Groups Ka ee tartanka kubadda Cagta Goboladda, kuna biiray saddexdii xul ee hore u baxay, oo kala ahaa, Saaxil, Awdal iyo Gabiley.
Ciidamada sugayay ammaanka garoonka ayaa qiiqa dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta nool u adeegsaday, koox taageerayaashii ciyaarta daawanayay kamid ah oo dhagax tuur bilaabay markii ay ciyaartu dhamaatay, arintaas oo sabbabtay dhaawaca ciidanka iyo shacabkaba leh.
Halkan ka daawo Wasiirka Oo ka hadlaya arrintan:
Chelsea 2-2 Tottenham Hotspur: Sawirada Ciyaartii Natiijadeedu Liecester City U Gacan Galisay Horyaalka
Tottenham Oo Ka Hadhi La’a Chelsea Kaalinta 2 aadna banaysatay
04/02/2017 Abdiwahab Ahmed